Instagram ကိုဘယ်လိုသတ်မှတ်မလဲ မိုဘိုင်းဖိုရမ်
Jesus Sanchez | | Instagram ကို, social networking
Instagram ဟာဖြစ်နိုင်ချေများတဲ့ကမ္ဘာကြီးပါ။ သုံးစွဲသူများသည်၎င်းကို အသုံးပြု၍ အချိန်ပိုကုန်ရန်အတွက် application တွင်နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာအသစ်များပါဝင်သည်။ ဒီနေ့ငါတို့ကစကားပြောမယ် အတော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ function ကိုအထူးသဖြင့်သင်သည်ဓာတ်ပုံများနှင့် upload တင်ခြင်းကိုနှစ်သက်သောသူများထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်လျှင် ပုံပြင်များ။ ငါတို့ပြောမယ် ဓာတ်ပုံ timer သို့မဟုတ် Instagram countdown.
ဒီတော့ဒီ post မှာမင်းကိုပြမယ် Instagram ကိုဘယ်လိုသတ်မှတ်ရမလဲ၊ iOS နဲ့ Android မှာပါ။ ဒါကငါတို့လုပ်ဖို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ် ပုံပြင်များ (သို့) ပုံပြင်တွေကငါတို့ရဲ့နောက်လိုက်တွေအတွက်ပိုပြီးမူရင်း၊ သို့သော်သင်မဖတ်မီရှင်းလင်းပါ ဒီနေရာတွင်အလိုအလျှောက်ဖမ်းယူသောပုံမှန်သမားရိုးကျтаймерကိုမည်သို့သက်ဝင်ရမည်ကိုသင်မြင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲပြီးနောက်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံ၏။ ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်«နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲ» Insta မှ။
1 Instagram timer ဆိုတာဘာလဲ
2 Instagram Timer ကဘာလဲ?
2.1 ကျွန်ုပ်၏ပို့စ်များတွင် timer ကိုသုံးနိုင်ပါသလား။
3 Instagram Stories တွင် timer ကိုအသုံးပြုရန်
4 Instagram ၏ timer လုပ်ဆောင်ချက်သည်သမားရိုးကျ timer မဟုတ်ပါ
Instagram timer ဆိုတာဘာလဲ
Instagram ဓာတ်ပုံ timer က « Countdown »တံဆိပ်မှတဆင့်ရရှိနိုင်သည့် Instagram Stories သို့ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းထားသောကိရိယာ။ ဒီ function ကaကိုပြသသည် နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲ ၎င်းသည် dynamically update လုပ်ပြီးအသုံးပြုသူကိုယ်တိုင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ သင့်နောက်လိုက်များအားသင်မျှဝေလိုသည့်အရေးကြီးသောဖြစ်ရပ်များသို့မဟုတ်ဖြစ်ရပ်များကိုမှတ်မိရန်အသုံးပြုသည်။
ဒီတံဆိပ်ကိုသတိရပါ အခြား Instagram ပုံရိပ်ပုံစံများတွင် သုံး၍ မရပါ (ထိုကဲ့သို့သောဂန္ထဝင်စာပေကဲ့သို့) သို့မဟုတ်ဓာတ်ပုံရိုက်ရန် timer နေရာတွင်အသုံးပြုပါ။ ဒီ function ကို tool ၏အမည်တူဖြင့်မရောထွေးပါနှင့်။
Instagram Timer ကဘာလဲ?
သင်၏မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများ၏ပုံပြင်များကိုတစ်ချိန်ချိန်တွင်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသင်သည်စတုဂံပုံသဏ္inာန်တစ်ခုတွင်တံဆိပ်တစ်မျိုးမြင်ရလိမ့်မည် ရက်စွဲအပေါ်တစ် ဦး နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲနှင့်အတူ timer နေရာမှာ သူတို့ထူထောင်ခဲ့ကြပြီ, ထို countdown ၏ခေါင်းစဉ်နှင့်အတူ။
သင့်ကိုထည့်ထားနိုင်ပါတယ် ဥပမာအချို့ သင်၏ Instagram ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်ဤ Instagram အင်္ဂါရပ်ကိုအသုံးပြုရန် -
သင့်ရဲ့ Countdown မွေးနေ့များ.
တစ် ဦး ထံမှ Countdown evento အရေးကြီး (ဖျော်ဖြေပွဲ၊ ပါတီ၊ ပွဲတော် ... )
ကျွန်ုပ်၏ပို့စ်များတွင် timer ကိုသုံးနိုင်ပါသလား။
အဖြေကမဟုတ်ဘူး။ ၎င်းကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသူများ၏အကြောင်းအရာများ၊ ဂန္ထဝင်ပို့စ်များပုံစံဖြင့်သုံးရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ထို့အပြင် Instagram ပေါ်ရှိဓာတ်ပုံများကိုအလိုအလျောက်ဓာတ်ပုံရိုက်ရန် timer နေရာကိုသတ်မှတ်ရန်သက်ဆိုင်ရာ function ကို သုံး၍ မရပါ။
Instagram Stories တွင် timer ကိုအသုံးပြုရန်
ကိုအသုံးပြုရန်အတွက် Instagram ကို၏ timer နေရာမှာသို့မဟုတ် countdown သင်၏ Android သို့မဟုတ် iOS စက်တွင်အောက်တွင်တွေ့ရမည့်ရိုးရှင်းသောအဆင့်များကိုသင်လိုက်နာရမည် -
သင်၏အက်ပလီကေးရှင်းပေါ်တွင် Instagram အက်ပ်ကိုဖွင့်ပါ။
အိုင်ကွန်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ အိမ်ပုံစံ အောက်ပိုင်းလက်ဝဲတွင်တည်ရှိသည်။
ထို့နောက်သူပြောသည့်နေရာကိုနှိပ်ပါ "သင်၏သမိုင်း" အယ်ဒီတာကိုဖွင့်ရန် ပုံပြင်များ Instagram ကို။
၏အယ်ဒီတာပြီးတာနဲ့ Instagram ပုံပြင်များ"Story mode" ကိုရွေးချယ်ထားပါ။
ယခု icon ၏ပုံကိုနှိပ်ပါ စိုင်းထီးဆိုင် ညာဘက်အပေါ်ထောင့်မှာတွေ့နိုင်ပါတယ် Post-it သို့မဟုတ်မှတ်စု) နှင့်တံဆိပ်ကိုရွေးပါ နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲ။
နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲ၏အမည်ကိုသက်ဆိုင်ရာစာသားကွက်လပ်၌ရေးပြီး«ကိုနှိပ်ပါ။အဆုံးသတ်နေ့စွဲနှင့်အချိန်ကိုသတ်မှတ်» အောက်ခြေမှာတံဆိပ်၏။ အချိန်အတိအကျကိုသတ်မှတ်လိုပါကရွေးစရာကိုပိတ်ထားပါ တစ်နေ့လုံး မိမိအ switch ကိုပိတ်ထား။
သင်တို့သည်လည်းလုပ်နိုင် activar o desactivar လူတွေကိုသင့်ကိုမြင်ခွင့်ပေးဖို့ရွေးစရာပါ ဇော်ပိုင် သတိပေးချက်များကိုတင်ပြီးသင်၏ပုံပြင်ပေါ်တွင်သင်၏ရေတွက်ခြင်းကိုမျှဝေပါ
ပြီးဆုံးရန်ကိုနှိပ်ပါ အဆင်သင့် အပေါ်ညာဘက်မှာ။ သင် ... နိုင်ပါသည် အရောင်ပြောင်းပါ ထိပ်ဘက်ရောင်စုံစက်ဝိုင်းပေါ်တွင်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်တံဆိပ်၏။
အရာရာတိုင်းအဆင်သင့်ဖြစ်တဲ့အခါကိုနှိပ်ပါ မင်းရဲ့ပုံပြင် အောက်ခြေကပုံပြင်ကိုတင်ရန်ကျန်ခဲ့သည်။
အတွင်းမှာမြင်ရလိမ့်မယ် ရရှိနိုင်သည့်ရက်စွဲများ, သင်ရွေးချယ်နိုင်သည် မည်သည့်နှစ်မဆိုနေ့ဖြစ်၏အချိန်ကာလနှင့်စပ်လျဉ်း။ မည်သည့်ကန့်သတ်ချက်မျှမရှိပါ။ နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲကိုအဆုံးသတ်နိုင်သည် တစ်နေ့လုံးသို့မဟုတ်အတိအကျအချိန်.
Instagram ၏ timer လုပ်ဆောင်ချက်သည်သမားရိုးကျ timer မဟုတ်ပါ
အကယ်၍ သင်ရှာနေတာဟာသမားရိုးကျ timer တစ်ခုကိုဘယ်လိုသက်ဝင်ရမလဲ နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲပြီးနောက်ဓာတ်ပုံကိုအလိုအလျောက်ဖမ်းယူသည် ကျွန်တော်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သော Instagram ပေါ်တွင်ဓာတ်ပုံရိုက်နိုင်ရန် အဘယ်သူမျှမ ဒါဟာလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခုဖြစ်သကဲ့သို့၎င်းသည်သင့်ကိုကူညီလိမ့်မည်။ ဒီကိရိယာကိုစာပေတွေမှာသုံးလို့မရဘူး၊ မင်းရဲ့ဇာတ်လမ်းတွေထဲကိုပဲ.
သင်မြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်း Instagram သည် application အတွင်း၌စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောအင်္ဂါရပ်အသစ်များကိုအခါအားလျော်စွာထည့်သွင်းပေးသည်။ ၎င်းသည်စွဲလမ်းမှုကင်းမဲ့သကဲ့သို့ ... Instagram timer လုပ်ဆောင်ချက်သည်သင်၏လုပ်ရန်အတွက်စိတ် ၀ င်စားစရာတစ်ခုဖြစ်သည် ပုံပြင်များ ဒြပ်စင်ဌခံစားပါlamative ဆွဲဆောင်မှုနှင့်ကွဲပြားခြားနားသော။ အကယ်စင်စစ်သင်သည်သင်၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်လိမ့်မယ် အရူးအမူး.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - မိုဘိုင်းဖိုရမ် » social networking » Instagram ကိုဘယ်လို timer သတ်မှတ်မလဲ
အားသွင်းစရာမလိုဘဲ Laptop ကိုဘယ်လိုအားသွင်းမလဲ